Nagu saabsan | Yueqing Tailei Electric Co., Ltd.
Yueqing Tailei Korontada Co., Ltd. waa mid ka mid ah soosaarayaasha sida gaarka ah ugu takhasusay xasilinta danab oo leh khibrad ka badan 15 sano.Xasiliyaha danab, transformer , difaaca danab iyo xakamaynta quudiyaha ee gariirka leh waa wax soo saarkeena ugu weyn.
TAILEI waxay leedahay koox xoogan oo R&D ah oo leh wax ku saabsan 150 shaqaale ah iyo in ka badan 8000 square mitir soo saar aag, oo leh xarumaha wax soosaarka ugu horumarsan oo ay ka mid yihiin PCB, Transformer, Relay, Tooling, Pjection Cirjection, Sheet Birta, Silkscreen, Workshops Assembly, iyo Lines 6 Assembly. ah aqoon isweydaarsiyo casri ah iyo qalabka wax soo saarka horumarsan, ka sokow waxaan had iyo jeer u soo bandhignaa tikniyoolajiyad si wanaagsan, dib u habeynta farsamada si isdabajoog ah Muhiimadu waa inaan heysano 5 kooxda xirfadeed ee injineerada iyo shaybaarka heeganka ah ee lagu baaro badeecada .Waxaan u huraynaa lacag iyo tamar wax ku ool ah soo dejinta iyo soo saarista khadadka wax soo saarka horumarsan iyo tikniyoolajiyadda tijaabinta tayada, taasoo kalsooni ka heleysa macaamiisheena.
Badeecad kasta waxaa loogu talagalay inay caqli galiso howlaha ugu dambeeya si ay macaamiisheenna uga dhigto mid raaxo ku leh isticmaalkiisa. Waxaan sameynaa cilmi baaris suuqa, waxaan baranaa jawiga kaladuwan ee isticmaalka, kicin natiijooyinkayaga shaybaarka, oo waxaan tijaabineynaa kahor intaan suuqa laga bilaabin. Waxaan dib u cusbooneysiineynaa fikirka dadka ee ku saabsan awooda nadiifta ah waxaana gaarnay taariikh cusub sanad walba.
Waxaan cadeynay inaan nahay kuwa sifiican ugu adeegaya macaamiisheena 35 sano ee lasoo dhaafay. Dulqaadkeena sare iyo joogteynta adeega ayaa na siineysa kalsooni weyn: laga bilaabo maanta waxaan horeyba u siineynaa alaab in kabadan 700 macaamiil ah oo ka kala yimid wadamada 95 aduunka oo dhan.
Naqshadeynta, dhiig-miirashada, iyo waxsoosaarka isku xiran ee ku sii qulqulaya nidaamka hawlgalka, waxaan ku guuleysaneynaa sumcad kaamil ah macaamiisha. ISO9001: 2008 kuna kasbado CE, PCT iyo ROSH, SONCAP, SASO Waxaan sidoo kale bixinaa adeeg OEM & ODM oo xirfad leh si aan u qancino shuruudaha kala duwan ee macaamiisheena.Waxaan ku adkeyneynaa tababarka shaqaalaha, soo saarida alaabooyin cusub oo ku saleysan tikniyoolajiyadda iyo u adeegida bulshada. Waxaan jeclaan lahayn inaan mustaqbal qurxoon idinla dhisno.
Right Xuquuqda daabacaadda - 2010-2020: Dhammaan xuquuqda ayaa la keydiyay. Talooyin - Alaabada Featured - Khariidadda bogga - Goob Mobilka Xasilinta danab ee Guri dhan, Xasiliyaha Dijital Dijitaalka ah ee loogu talagalay Ac, 2kva Xasilinta Danab, Xasilinta danab ee kordhiyaha, Xasiliyaha danab 5000va, 4kva Xasilinta Danab, Dhammaan Alaabooyinka